उवासंघ चितवनमा चुनावी चहपहल | चितवन पोष्ट दैनिक
उवासंघ चितवनमा चुनावी चहपहल
२०७० मंसिर १९, बुधबार ०३:२५ गते
जोशी, प्रधान र गौतम चर्चामा [divider]
नारायणगढ । संविधानसभाको चुनाव भर्खरैमात्र सम्पन्न भएको छ । देशमा चुनावी माहोल विस्तारै सेलाउँदै जाँदा चितवनमा भने उद्योग व्यवसायीको पद र प्रतिष्ठाको रुपमा लिइने उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको नेतृत्वको बारेमा छलफल र बहस चल्न थालेको छ ।
धेरैजसो अध्यक्ष सहमतीय प्रणाली र केही अध्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट चयन भएका छन् । यसपटक चाहिँ अध्यक्ष पदका लागि चुनाव होला कि सहमतिमै कार्यसमिति चयन होला, यो चर्चाको विषय बनेको छ ।
उवासंघ चितवनको १७ औं कार्यसमिति चयनका लागि आगामी पुस अन्तिममा साधारणसभा हुँदैछ । यसैदिनबाट हाल कार्यसमितिमा रहेका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन हुनेछ । अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका भट्टराई चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धी ज्ञानेन्द्रमान शाक्यलाई हराउँदै अध्यक्ष बनेका थिए ।
सरसर्ती हेर्दा उवासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेको व्यक्ति सहमति भएको अवस्थामा अध्यक्ष हुने प्रचलन देखिन्छ । यसरी हेर्दा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण जोशी अध्यक्ष बन्ने लाइनमा छन् ।
अघिल्लो कार्यकालका प्रथम उपाध्यक्ष मनोज प्रधान चुनाव नलडेपछि द्वितीय उपाध्यक्ष रहेका जोशी एक तह फड्को मार्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएका हुन् ।
अध्यक्षको लाइनमा देखिएका जोशीका लागि नेतृत्व हत्याउने बाटो भने सहज देखिँदैन । कार्यसमितिमा रहेका राजन गौतमले पनि अध्यक्ष पदका लागि आकाङ्क्षा देखाएपछि नेतृत्वको विषय झनै रोचक बन्दै गएको छ ।
त्यसो त अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका र यस कार्यकालमा कार्यसमितिमा नरहेका मनोज प्रधानलाई अध्यक्षको रुपमा अघि सार्ने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको कार्यसमितिका एक सदस्यले बताए । प्रधानलाई अध्यक्षको रुपमा अघि सार्न कांग्रेस निकट व्यक्तिहरु उनलाई फकाउन कसरत गरिरहेका छन् । अध्यक्षका प्रत्याशी जोशी कम्युनिष्ट विचारधाराका हुन् ।
गत कात्र्तिक २९ गते बसेको उवासंघ चितवनको २२ औं कार्यसमितिको बैठकले पुस २९ र ३० गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै बैठकबाट भावी अध्यक्षको चर्चा सुरु भएको छ । उवासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण जोशीको नाम अध्यक्षको रुपमा अघि सारेको छ । त्यस्तै संघका केही व्यक्ति भने अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका मनोज प्रधानलाई अध्यक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कार्यसमितिमा रहेर प्रभावकारी भूमिका खेलेका एक सदस्य राजन गौतम पनि अध्यक्षको आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन् । गौतमले औपचारिक अनौपचारिक रुपमै आफू अध्यक्षको दाबेदार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण जोशी निर्विकल्प रहेको संघका अधिकांश सदस्यहरु बताउँछन् । हालका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराई, भावी अध्यक्षका रुपमा अघि सारिएका जोशी र त्यसपछिका उपाध्यक्षहरु सहनलाल प्रधान, राजु श्रेष्ठ आदि कम्युनिष्ट विचारधाराका भएपछि कांग्रेस निकट पूर्वअध्यक्ष र हालका सदस्यहरु मनोज प्रधानलाई अध्यक्षका रुपमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् ।
‘मलाई संघमा नेतृत्वका लागि आग्रह गरिएको छ, मनोज प्रधानले भने,‘ तर जाने सोच भने छैन ।’ त्यसो त प्रधानले संघमा पुनः गएमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा प्रथम उपाध्यक्ष हुने तर अध्यक्षचाहिँ नहुने प्रस्ट पारेका छन् । अवको केही वर्ष कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा उवासंघ अघि बढ्ने भएपछि प्रधानलाई अघि सारिएको केही सदस्यहरु बताउँछन् । त्यस्तै अर्का आकाङ्क्षी राजन गौतम संघभित्रको धुलो, मैलो पखाल्न आफ्नो दाबेदारी आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
अध्यक्षसँगै उपाध्यक्षमा को–को उठ्ने भन्ने विषय पनि चर्चामा छ । उपाध्यक्षका आकांक्षी धेरै छन् । उपाध्यक्षमा खासगरी बद्री अधिकारी, चिरञ्जीवी सुवेदी, भोजराज कौडेल, चुननारायण श्रेष्ठ, सुमन श्रेष्ठ, शंकर कँडेलको नाम चर्चामा छ ।
उवासंघको इतिहासमा महेन्द्रलाल प्रधान, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मदनलाल जोशी र डा. भट्टराई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हात पार्न सफल व्यक्तिहरु हुन् । बाँकी अन्य व्यक्तिहरु सहमतिमै अध्यक्ष भएका थिए ।
उवासंघका झण्डै १ हजार ९ सय जनाले मत हालेर नयाँ नेतृत्व चुन्ने छन् । कार्यसमिति ३ जना मनोनीत एक पदेनसहित ३३ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ ।
साधारणसभा सफल बनाउनका लागि तयारी भइरहेको संघका कार्यकारी निर्देशक रसिक प्रधानले बताए । कार्यसमितिको २ वर्षे कार्यकाल रहने व्यवस्था छ ।
२०१९ साल माघ १९ गते उवासंघको स्थापना भएको हो । उवासंघको आयोजनामा प्रत्येक २ वर्षको फरकमा चितवन महोत्सव पनि हुँदै आएको छ । नेतृत्वमा दुईपटक रहनेमा सूर्यनारायण पिया, कृष्णबन्धु पिया र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ रहेका थिए ।